Ụgbọ njem ụgbọ elu nke Saratov
Ụgbọ njem ụgbọ elu nke Saratov 2 afọ 4 ọnwa gara aga #992
A na-ebibi ụgbọ elu nke Saratov Airlines 703, bụ Antonov An-148, mgbe ọ gbasịrị ebe dị nso Stepanovskoye, Russia. E gburu ndị njem 65 na ndị òtù 6.
Ụgbọelu ahụ kwụsịrị na 14R ọsọ ọsọ na Moscow Domodedovo Airport na 14: 21 awa oge oge (11: 21 UTC). Oge banyere oge ịpụ na Domodedovo Airport gụnyere njedebe dị ntakịrị (2100m) n'oge snow snow. Okpomọkụ bụ -5 Celsius C, ebe igwe ojii na-ekpuchi na 2600 ụkwụ AGL.
Kọmitii na-ahụ maka ụgbọelu dị na mpaghara kwuru na, tupu ọpụpụ, a kwụsịbeghị ikpo ọkụ nke obere olulu atọ.
Mgbe ị gachara, na 130-150 m (425-490 ft) n'elu ala, a gbanwere autopilot. A na - akpọlite ​​flaps ka ụgbọelu rịgoro na elu 550 m (1800 ụkwụ).
Banyere 2 nkeji 30 sekọnd mgbe nkedo ahụ, na ihe dịka mita 1300 (4265 ụkwụ) na ọsọ ngwa ngwa nke 465-470 km / h, enwere nghọtahie n'etiti agụpụta ọsọ ọsọ na ọdụ ụgbọ elu ma e jiri ya tụnyere akara ngosi ụgbọelu . Achọghị ka ikuku na-ekpuchi n'akụkụ akụkụ nke onye na-ahụ maka nchekwa dị ka ebe nchekwa data na-edeghị aha a. Enweghi ihe di iche di na ihe di elu. Mgbe ọzọ 25 sekọnd, esemokwu ahụ ruru 30 km / h na ọsọ na akụkụ onye agha ahụ ka ukwuu.
Mgbe ihe gbasara 50 sekọnd, na ihe dịka 2000 mita (6560 ft), ikuku ahụ na-egosi na ọ dị elu ma nọgidere na-amụba mgbe ikuku na ndị isi ASI nọgidere na-ebelata.
Ndị ọrụ ụgbọ elu ahụ kwụsịrị autopilot ahụ. Igwe ụgbọelu na-aga n'ihu na-arịwanye elu, ebe ASI nọrọ na njikere gosiri 540-560 km / h. Banyere 50 sekọnd mgbe autopilot gbanyụrụ, ụgbọ elu ahụ gafere 1700-1900 m (5580-6230 ft) nke nwere nkwụsị nke sitere na 1.5 ruo 0.5 g. Mgbe nke a gasịrị, ụgbọ elu ahụ rutere n'ebe dị elu na ASI n'akụkụ akụkụ ụgbọ mmiri na-egosi 0 km / h, na ASI na-echere na-egosi 200 km / h. Ụdị ọkwa ahụ na-ebelata -30 / -35 ogo na ihe nkwụsị nke 0 g.
Ụgbọelu ahụ na-ekpo ọkụ na gburugburu 14: 27: 05 na disintegrated. Tupu nkwekọrịta ahụ na ala, ndị ASI na-echere mụbaa na 800 km / h na ASI onyeisi ụgbọ mmiri ka na-egosipụta 0 km / h.